မယ်လိုဒီမောင်၏ ငြိမ်းချမ်းသံစဉ်: မြန်မာပြည်ကိုကွယ်..လွမ်းတယ်..ပြန်တော့မယ်
မြန်မာပြည်ကိုကွယ်..လွမ်းတယ်..ပြန်တော့မယ်Track4- Unknownနေရောင်ခြည်တန်းဟာ နွေးနွေးလေးပဲနေလဲ လွမ်းစေတယ်မြန်မာပြည်နဲ့တော့ ခြားနားမှုရှိတယ်အာရုံနေ့ဦးမယ် ကြည့်လိုက်တို့ရဲ့ပြည်ရနံ့တွေရယ်တပြည်ငါရောက်တာ သတိရ ရလို့နေမြန်မာပြည် အဝေးကြီးပေါ့နေနိုင်အောင် ကြိုးစားတယ်မလွယ်ဘူးသိ တို့သိလာတယ် သိလာတယ်အိုသိပါပြီပြန်တော့မယ် အမိမြေကိုမြန်မာပြည်ကိုကွယ်..လွမ်းတယ်..သွားမယ်..မြန်မာပြည်ကိုကွယ်..လွမ်းတယ်..သွားမယ်..မြန်မာပြည်ကိုကွယ်..သွားမယ်..ပြန်တော့မယ်ခြေတံရှည်လေးနဲ့ ကြမ်းခင်းထားတဲ့ မြန်မာ့အိမ်မယ်ဘော်ငွေလရဲ့ ဆောင်းညနွေးလွန်းတယ်ဒါတွေကို ငါမမေ့ပြန်တွေးမိတော့ အို..ဆွေးစေတယ်ဧရာဝတီမြစ်ကြီးနဲ့ မန်းလေးနန်းတော် မဟာမြတ်မုနိကမ္ဘာ့အံ့ဘွယ်ဘုရားများကို ရှိခိုးဖူးမျှော်ချင်တယ် အဝေးရောက်ကျွန်တော်မြန်မာ့စိတ် မြန်မာ့ရေမြေအဝေးမှ ချစ်..ချစ်လာတယ်တို့မြေကို ပြန်တော့မယ်မြန်မာပြည်ကိုကွယ်..လွမ်းတယ်..သွားမယ်..မြန်မာပြည်ကိုကွယ်..လွမ်းတယ်..သွားမယ်..မြန်မာပြည်ကိုကွယ်..လွမ်းတယ်..ပြန်တော့မယ်...........................ပြည်တော်ပြန်ခရီးဟာ တွေးတိုင်း သိပ်လှ...........................
အမလေး... မာမီရယ်.. ပိုစ့်ခေါင်းစဉ်ဖတ်မိပြီး တကယ်များ ပြန်တာလားလို့ သိချင်လို့ အမောတကော ပြေးလာလိုက်ရတာ...း)။
မြန်မာပြည် အဝေးကြီးပေါ့?from chin gar pu? wooooooooooot!!!
တောင့်ထား တောင့်ထား။ မကြာခင်မှာ လေပြေလေးတွေတိုက်နေတဲ့ နေ့ရောက်တော့မှာ။
အတောင်စုံရင်တော့ ပြန်ကြတာပေါ့ :)
>>မိုးမောင် အမယ်မယ် အပိုတွေ ဟွန်း တကယ်မပြန်မှန်းသိမှ အလုံးကြီးဆို့သွားတာဟုတ် :P>>anonymous စင်ကာပူအနေနဲ့ရော လုံဒုံရောက်ချစ်သော တစ်ယောက်အတွက်ပါ ခံစားတာမို့ အဝေးကြီးပဲပေါ့ဆို>>MrDBA ဟုတ်ကဲ့ အမြဲအားပေးတဲ့ ချစ်ကိုကြီးရေ တောင့်ထားသဗျ သိုင်းခရု>>CMS အတောင်မြန်မြန်စုံချင်ပ၊ ဒါမှ မြန်မြန်ပြန်ကြရမယ်ကွာ :-(